Ciyaartooyda Qaranka ee Mustaqbalka ayaa ku Soo Baxaya Zigana Ski Resort | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir29 GumushaneCiyaartoyda Qaranka ee mustaqbalku waxay ku barbaarayaan Xarunta Zigana Ski Center
26 / 01 / 2020 29 Gumushane, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
Ciyaartoyda mustaqbalka ee xulka qaranka waxay ku koraan meelaha loo dalxiis tago ee zigana
Agaasinka Dhallin-yarada iyo Cayaaraha ee G providesmüşhane wuxuu siiyaa tababar baraf ah in kabadan 100 arday oo ku sugan Xarunta Zigana Ski Center oo leh tababarayaal sanad dugsiyeedka 2019-2020.
Gaadiidka, Cuntada, Waxbarashada waa la soo dhoweeyay
Waxay ku taallaa in xuduudaha degmada Gumushane Torul, Turkey iyo Eastern Black Sea ee, mid ka mid ah ugu xarumaha ski muhiim ah ee gobolka Zigana Silver Ski, Gumushane, Dhallinyarada iyo Isboortiga tababarka ski siiyey gudahood tababarayaasha qalab ka badan 100 arday ski, waxa ay sidoo kale bixisaa gaadiidka iyo tas-hiilaadka qadeysaa.
Agaasimaha gobolka ee dhalinyarada iyo isboortiga, Mücahit Atalay, wuxuu sheegay in magaaladu ay leedahay awood ay leedahay qeybta barafka wuxuuna yiri in magaca Gümüşhane lagu dhawaaqay orodyahanka xulka Muzaffer Demirhan.
Agaasime Atalay wuxuu cadeeyay in kabadan 100 arday in lasiiyay tababaro baraf ah oo uu wargeyskeena ku yiri, “Waxay ku bilaabatay fasaxa nus-sano badan. Sida dhammaan tas-hiilaadkayada, baraf-barafkayagu wuxuu ahaa mid aad u sareeya kana fog wixii aan fileynay. Waxaan siin doonaa tababar baraf ah ku dhawaad ​​100 arday inta lagu jiro fasaxa semesterka. Waxaan u kaxeeynaa carruurteena adeegyo, waxaana u geynnaa garoon barafka. Tababarayaashayada ayaa siiya tababaro baraf ah. Waxaan kaloo soo dhawaynaynaa qado. Fiidkii, adeegyadeena ayaa carruurta uga celiya guryahooda. Waxaan leenahay tababarayaal baraf ah oo aad u guuleysta. Waxaan siineynaa caruurteena tababaro barafka ah iyadoo hoos imaaneysa kormeerayaashayada. ”
“Waxaan dooneynaa inaan sare u qaadno abaalmarinta cusub”
Atalay wuxuu yidhi, "Gümüşhane waa gobol leh awooda lagu baratamo. Jacaylka iyo xiisaha ay dadku u qabaan isboortiga ayaa sidoo kale naga farxiya. Gümüşhane wuxuu naftiisa ku dhawaaqay qaybta ciyaaraha barafka isaga oo leh orodyahankeena xulka Muzaffer Demirhan. Hamigeenna waa inaan awoodno inaan tababarno Muzaffers cusub. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee tababbaraasheena aan soo qaadnay sanadkan waa in ay da 'yaraayeen. Waxaan rajeyneynaa, inaan higsaneyno inaan kor u qaadno ciyaartooy wanagsan oo ku dhawaaqi doona magaaladeena oo matali doonta wadankeena. Waxaan rajeynayaa inaan tan ku qaban doonno waqti gaaban. ”
Isagoo tilmaamay in carruurteenna barafka aysan ahayn xirfadleyaal, Agaasime Atalay wuxuu yiri hadafkoodu waa in magacyo cusub lagu daro barkadaha ciyaaraha.
'Waxaan dooneynaa inaan ku darno magacyo cusub barkadda ciyaaraha'
Maamulaha Atalay ayaa yidhi, “Hadafkeennu waa in magacyo cusub lagu daro barkadda ciyaaraha fudud. Marka laga reebo in yar oo ka mid ah 100-ka arday ee aan halkaan ku qaadno, waxaan haysannaa carruur ku cusub baraf-ka, oo aannan aqoon gebi ahaanba barafka. Markii la xirayay iskuulada, waxaan ardayda u keenay Xarunta Zigana Ski Center si loo bixiyo tababbarka barafka. Inta lagu jiro fasaxa, waxaan siin doonnaa tababar baraf baraf ah carruurteenna, markaa waxaan qorsheyneynaa inaan sii wadno tababarka ardayda aan dooran doono, illaa inta xilliyada xilliyada la oggol yahay.
Agaasimaha dhalinyarada iyo isboortiga Atalay wuxuu sii waday hadaladiisa sida soo socota: “Kadib markii tababaraheena la keeno marxalad gaar ah iyadoo la eegayo tababarayaashayada, soo bandhigida agabyada loo isticmaalo barafka, qatarta carruurta iyo hagida tababarayaasheena. Caruurteenu sidoo kale waa kuwo aad u walaacsan oo dadaal badan. Tababaraheena aad ayey ugu faraxsanyihiin carruurta. ”
'Waxaa jiray Maalgelinno Isboorti oo Adag muddo 15 sano ah'
Isagoo hoosta ka xariiqay inay waalidkeenna ku qanacsan yihiin dalabyadooda, Atalay wuxuu yidhi, “15-kii sano ee la soo dhaafay, maalgalinno isboorti oo aad u culus ayaa la sameeyay. Wuxuu ka helay qaybtiisi maalgashiyada magaaladeena. Waxa xarunta ka dhigaya mid qiimo leh waa isticmaalka dadka. Markii dad badani u isticmaalaan, xarunta waxay u adeegtaa ujeedkeeda. Waxaan rabaa inaan waco muwaadiniinteena. Waxa jira laamo ku yaal xarumahayaga iyo saqafyadayada oo u oggolaada dhammaan kooxaha da'da oo dhan. Ku hay carruurteenna oo u keena inay ciyaaraan isboorti, "ayuu yidhi.
Tuna Kerem Kızılet oo ah ardayga fasalka 6-aad ayaa sheegtay in ay u timid in ay barafka gasho iyadoo da 'yar waxaana ay tiri, "Waxaan tababar barasho la qaadanaynaa macallimiintayada. Waxaan galnay nasashada semesterka, waxaan u gudubnaa fasaxa annaga oo isbucinaya oo aan ku raaxeysan karno kombiyuutarka. Waxaan haysanay saaxiibo ka qeyb qaatay tartamada. Waxaan ku casuumay dhamaan asxaabteena inay ka kacaan kumbuyuutarka oo ay iskaga dhuftaan. ”
Musqulaha mustaqbalka waxay ku qabtaan liiska liiska
Mucjisooyinka ku qoslaya Xarunta Dhexe ee Zigana
Mashruucyada Horumarinta Mashruuca Gargaarka Ski
Zigana Gümüşkayak ayaa dalbaday dalab aad u sareeya oo loogu talagalay ciyaaraha kubadda cagta ee Yaylakent
Koritaanka Tosya D-100
Waddada Abant-Taşkesti waxay u koreysaa iidada
Agaasime waaxeedyada dhalinyarada iyo cayaaraha ee Gümüşhane
Ciyaartoyda xulka qaranka
Xarunta Badbaadada Zigana Silver Ski
Meelaha lagu ciyaaro ee Zigana